Caqabada: Sida Suuq-geynta Shirkaddu u saameyn karto natiijooyinkaaga SEO
Xirfadlayaasha digitalka badanaa waxay isticmaalaan suuq-geynta emailka ah sida saameyntaraadinta mashiinka raadinta ee bogga si aan toos ahayn. Haddii marxaladda koowaad ee xidhiidhinta ay adagtahay in la arko, sameynta suuq-geynta emailkaololeyaal ayaa ka caawiya:
Wax-qabadyada loo adeegsado siyaabo kala duwan,
Uruurinta fikradaha qiimaha leh ee shirkadda iyada oo loo marayo faallooyinka qaybta blogka
Xayaysiisyada waxay samayn karaan shirkad si ay u xakameeyaan muuqaalkooda shakhsi ahaaneed iyagoo wadaagaya boostooyinka.
Emails ayaa soo jiidan kara dadka kale iyada oo loo marayo marin kale oo warbaahinta bulshada ah
Sidaa darteed, SEO iyo email toos ah looma xirmin. Makiinadaha raadintaHa ku xayirin liiska shakhsiyaadka mid la beegsan karo waqti go'an. Si kastaba ha noqotee, dhagaystayaasha si firfircoon uga dhex shaqeeya emailswaa hab la xaqiijiyay oo qaadi kara taraafikada tayada ee boggaaga internetka si aad u fiican. Artem Abgarian, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare sharaxaad ka bixin sida saamaynta suuq-geynta emailka SEO
Ka qaybgalka firfircoon ee dhagaystayaasha
Nooc digital ah ee emails sida keywords muhiim ma ahasaameyn kasta oo ku saabsan qiimeynta SEO. Si kastaba ha noqotee, si habboon u sameynta ololeyaal email waxay soo jiidataa khayraadka ugu fiican ee taageeraya kelmado gaar ah oo ku saabsanwuxuu kordhiyaa cufnaanta raadinta makiinadaha raadinta. Emails ayaa sidoo kale dhiiri geliya faallooyinka iyo wadaagista. Tusaale ahaan, boostada blogka ee fiicanhelitaanka faallooyinka xagga hoose. Wadaagista ayaa sidoo kale u dhici doona booskaas oo kale oo ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee internetka sida warbaahinta bulshada. Natiijo ahaan,Tirada ra'yiga maqaalku waxay hagaajineysaa dib u soo celinta lagama maarmaanka u ah hagaajinta heerka SEO..Qaar ka mid ah waxqabadyada wicitaanka ee wax-qabadkamid ka mid ah la samayn karo liiska emailka waxaa ku jiri kara:
Weydiiso akhristayaasha inay faallo ka bixiyaan qaybta hoose ee blogka sida ay boostada u caawin doonto,
Ku dhiirigeliya dhagaystayaasha in ay wadaagaan mashruuc samafal ah si ay u faafiyaan sabab wanaagsan iyo,
Kordhinta suuq-geynta faayraska iyada oo la adeegsanayo warbaahinta bulshada sida Twitter ama Facebook.
Akhrista RSS ama Isticmaalka Xogta caadiga ah
Samaynta dhagaystayaasha ayaa riixaya xiriirinta shabakadaada internetkahawl fudud. Si kastaba ha noqotee, in dadka dhagaystayaasha sameeya ay ku xiran yahiin mawduucaaga ayaa noqon kara caqabad. Farqigaasi wuxuu sababaa sababtoo ah mid baa loo baahan yahaymid gaar ah hab gaar ah iyo nooca content. Dhegaystayaashu waxay ubaahan yihiin inay raadiyaan maadada oo ay akhriyaan xitaa kahor wargelinsi isku mid ah. Tusaale ahaan, mid ayaa:
Hubi in dadku ay ogyihiin in ay sii wadi karaan cusbooneysiinta raaca RSS,
Sii ikhtiyaarka ah inaad ku biirto liisaska liiska ogeysiisyada waxyaabo gaar ah iyo,
U oggolow dadka inay ku biiraan hay'adaha warbaahinta bulshada sida ku biiritaanka fiidiyowyada YouTube YouTube
Waddooyinka warbaahinta bulshada ee helitaanka macluumaadkaaga waa afuraha weyn si ay martida u joogaan ilaa iyo taariikhda qoraallada blogka
Dib-u-dhajinta qoraalka warbixinta
Xogta laga soo qaado emails ayaa dib loogu noqon karaa maadooyinkablogga. Dadku waxay ka faa'iideysanayaan adigoo isticmaalaya buuggan warsidaha iyagoo qoraya sida ay u caawineyso. Tusaale ahaan, wargeysyada waqti dheer waxay noqon karaan blogposts kuwaas oo soo jiidi karo qolka for comments dheeraad ah. Wargeysyada gaaban waxay soo jiidan karaan fursado ay ku wadaagi karaan warbaahinta bulshada oo sii kordhaya liiska SEO.Xaaladdan waxay u oggolaaneysaa dadka aan udifaacin RSS-ka inay akhriyaan waxyaabaha aad ka akhriso.
Sawiridda arrimaha kor ku xusan, macaamiisha Sare waxay cadeeyeen in emails ay hagaajin karaan qiimeynta SEO. Iyada oo la dhex galiyo dhagaystayaasha, dib u soo celinta wargeysyada, iyo macluumaadka RSS-kaogeysiinta wargelinta, natiijooyinka farsamooyinka "Search Engine Optimization" ayaa bixin doona. Wixii blogger kasta oo raba inuu helo gaadiidka wanaagsan,abuurista liis wanaagsan oo e-mail ah ayaa noqon kara mid firfircoon Source .